8 Zvino mugore rechitanhatu, mumwedzi wechitanhatu, pazuva rechishanu romwedzi wacho, ndakanga ndakagara mumba mangu, uye varume vakuru vaJudha vakanga vakagara pamberi pangu,+ ruoko rwaChangamire Ishe Jehovha parwakauya pamusoro pangu ndiri imomo.+ 2 Zvino ndakaona, uye tarira! kwaiva nechinhu chakanga chakaita somoto;+ kutangira maiita somuhudyu make zvichidzika maiva nomoto,+ uye kutangira muhudyu make zvichikwira maiva nechinhu chakanga chakaita sokupenya, sokupenya kwechinhu chakagadzirwa nendarama nesirivha.+ 3 Akabva atambanudza chinhu chakaita soruoko,+ akanditakura akabata zhumu romusoro wangu, mudzimu+ ukanditakura nepakati penyika nematenga, ukandiendesa kuJerusarema ndichiratidzwa zviratidzo naMwari,+ ukandiendesa kusuo regedhi romukati+ rakatarira kuchamhembe, kune nzvimbo inogara chiratidzo chegodo chinomutsa godo.+ 4 Zvino tarira! kubwinya kwaMwari waIsraeri kwakanga kuri ipapo,+ kwakaita sokwandakanga ndamboona mubani. 5 Zvino akati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, ndapota, tarira nechokuchamhembe.” Naizvozvo ndakatarira nechokuchamhembe, ndikaona kuchamhembe kwegedhi reatari kuine chiratidzo ichi chegodo,+ chiri panopindwa napo. 6 Akati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, uri kuona here zvinhu zvikuru zvinosemesa zvavari kuita,+ zvinhu zviri kuitwa neimba yaIsraeri muno kuti ini ndive kure nenzvimbo yangu tsvene?+ Zvino uchaonazve zvimwe zvinhu zvikuru zvinosemesa.” 7 Naizvozvo akaenda neni kusuo rechivanze, ndikaona, uye tarira! kwaiva neburi raiva pamadziro. 8 Zvino akati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, ndapota, boora madziro.”+ Ndakaboora madziro acho zvishoma nezvishoma, uye tarira! kwaiva nesuo. 9 Akatizve kwandiri: “Pinda uone zvinhu zvinosemesa zvakaipa zvavari kuita muno.”+ 10 Naizvozvo ndakapinda, ndikaona, uye tarira! makanga muine mifananidzo+ yose yezvinhu zvinokambaira nemhuka dzinosemesa,+ nezvidhori zvose zvinosemesa sendove zveimba yaIsraeri,+ mifananidzo yacho yakaita zvokutemerwa iri pamadziro kumativi ose. 11 Vamwe varume vakuru makumi manomwe+ veimba yaIsraeri, pamwe chete naJaazaniya mwanakomana waShafani+ akanga akamira pakati pavo, vakanga vakamira pamberi payo, mumwe nomumwe aine mudziyo wake wokupisira zvinonhuhwirira muruoko rwake, uye kunhuhwirira kwegore rerusenzi kwakanga kuchikwira.+ 12 Iye akati kwandiri: “Haiwa iwe mwanakomana womunhu, waona here zviri kuitwa nevakuru veimba yaIsraeri murima,+ mumwe nomumwe ari mudzimba dzomukati dzezvifananidzo zvake? Nokuti ivo vanoti, ‘Jehovha haasi kutiona.+ Jehovha akabva panyika.’” 13 Zvino akaramba achiti kwandiri: “Uchaonazve zvimwe zvinhu zvikuru zvinosemesa zvavari kuita.”+ 14 Naizvozvo akaenda neni kusuo regedhi reimba yaJehovha, riri nechokuchamhembe, uye tarira! kwaiva nevakadzi vakanga vakagara, vachichema mwari anonzi Tamuzi. 15 Zvino akatizve kwandiri: “Haiwa iwe mwanakomana womunhu, wazviona here? Uchaonazve zvimwe zvinhu zvikuru zvinosemesa+ kupfuura izvi.” 16 Naizvozvo akapinda neni muchivanze chomukati cheimba yaJehovha,+ uye tarira! pasuo retemberi yaJehovha, pakati pevharanda neatari,+ paiva nevarume vanenge makumi maviri nevashanu+ vakanga vakafuratira temberi yaJehovha,+ zviso zvavo zvakatarira kumabvazuva, uye vakanga vakakotama vakatarira kumabvazuva, kwaiva nezuva.+ 17 Zvino iye akati kwandiri: “Haiwa iwe mwanakomana womunhu, wazviona here? Chinhu chiduku here kuimba yaJudha kuti iite zvinhu zvinosemesa zvavari kuita muno, kuti vazadze nyika nechisimba,+ kuti vandigumburezve, uye tarira vari kutambanudzira nhungirwa kumhino yangu? 18 Iniwo ndichaita nehasha.+ Ziso rangu harizonzwi urombo, uye ini handizonzwi tsitsi.+ Vachashevedzera munzeve dzangu nenzwi guru, asi ini handizovanzwi.”+